Igwe na-ejuputa FKF805 Flow Mita ziri ezi
Igwe na-ejuputa FKF805 Flow Mita ziri ezi.Isi ndochi na mita eruba bụ nke igwe anaghị agba nchara 316L, nwere ike ijide ọtụtụ mmiri mmiri na-enweghị viscosity dị ala.Igwe ahụ nwere nhazi nke mmiri, Ọ nwere ọrụ nke mgbochi ntapu, mgbochi splash na mgbochi waya ịbịaru.Iji zute nha dị iche iche nke ndị ahịa na ụdị nke ịcha mma na-ejuputa karama. Enwere ike iji igwe na-eme ihe maka gburugburu, square na flat bottle.
FKF805 nwere ike ime mgbanwe na mmiri mmiri na-ejuputa akụkụ buru ibu nke ngwaahịa, dị ka ọgwụ (mmanụ, mmanya, mmanya, anya tụlee, sirop), chemicals (ihe mgbaze, acetone), mmanụ (mmanụ oriri, mmanụ dị mkpa), ịchọ mma (toner). , ihe ndozi etemeete, ịgba), nri (nwere ike idi ogo 100 nke oke okpomọkụ, dị ka mmiri ara ehi, mmiri ara ehi soy), ihe ọṅụṅụ (ihe ọṅụṅụ, mmanya mkpụrụ osisi), condiments (soy sauce, mmanya, mmanụ sesame) na mmiri mmiri ndị ọzọ na-abụghị granular; Mmiri ụfụfụ dị elu dị elu (ihe ngwọta nlekọta, detergent).N'agbanyeghị nnukwu ma ọ bụ obere olu nwere ike imeju.